Xisbiga UCID oo Si Kulul Ugu Cambaareeyey Wasiirka Ciyaaraha Falkii Ka Dhacay Kooxda Togdheer Isla Markaana Sheegay Inay ka Xun Yihiin Xadhiga Ciyaartoyda | Salaan Media
Xisbiga UCID oo Si Kulul Ugu Cambaareeyey Wasiirka Ciyaaraha Falkii Ka Dhacay Kooxda Togdheer Isla Markaana Sheegay Inay ka Xun Yihiin Xadhiga Ciyaartoyda
Ku: Saxaafadda Madaxabanaan
Waxa aan warsaxaafadeedkan jecelnahay in aanu ku muujino dareenkayaga ah in aan ka xunahay falkii xadhiga ahaa ee lagu la kacay Ciyaartoygii Kubadda Cagta ee Gobolka Togdheer taas oo keentay in ay ka soo xaadiri waayaan garoonka ay ciyaarta kula lahaaheey kooxdii kubadda cagta ee ka socotay Gobolka Sool shalay oo taariikhdu ahayd 8/06/2013. Waxa kale oo aanu canbaareynayna hadaladdii ka aradnaa anshaxa, asluubta, iyo diblamaasiyadda ee Wasiirka Ciyaaraha iyo Dhallinyaraddu ka sheegay warbaahinta isaga oo ciyaartowga gobolka ku eedeeyay in ay qabyaalad u kala safteen. Runtii waa nasiib daro weyn in mas’uul qaran uu si badheedha u dhex dhigo fidno, naxli, iyo cudur dadka walaalaha ah ee wada degan gobolka si uu u wiiqo midnimadooda iyo wada-jirkooda si kas iyo maag ahna uu u dilo magacii iyo sumcadii ay ciyaartoyga gobolka togdheer ay lahaan jireen. Waxa arrintaasi laga dheehan karaa ama ay ku tusaysaa dhowr arrimood:-
Waa ta kowaade tamar daradda guud ahaan xukuumadda Somaliland, gaar ahaana Maamulka Gobolka T/dheer iyo Wasaaradda Ciyaaraha ee xalka u waayay khilaafka shaadhka reereysan loo xidhay ee lagu soo dhextuuray ciyaartoyga gobolka ee ilaa in muddo ah soo jiitamaayay. Taasnai waxa laga sii saadaalin karaa in Xukuumaddu dhameyn kari weyday ama xalka u weyday Khilaaf iyo tabashooyinka ciyaartow-yo Gobol ka wada yimid aan lagu halleyn karin wax-ka-qabashadda Tabashooyinka Beelaha Somaliland ee hadda jira. Waa ta labaad, waxa arrinta laga fahmi karaa Siyaasadda Xukuumadda ee ah ‘Qeybi oo Xukun’ oo durtaba ay ku tijaabisay sidii Warqadda ‘Litmus Test Paper’ dadkii wada degganaa gobolka Togdheer. Waa ta seddexaad eh in xukuumadda Aabbe iyo Hooyaba u tahay si xun u adeegsiga qabyaaladda iyo reeraha taas oo markhaati uu kuugu filan yahay sidii uu Wasiirka Ciyaaraha iyo Dhallinyaradda u hadlaayay shalay, 08/06/2013.
Waxa aan ummadda reer Somaliland guud ahaan, gaar ahaan, kuwa gobolka togdheer ugu baaqeynaa in ay ilaashadaan midnimadooda iyo wadarjirkooda kana feejignaadaan dabinadda iyo shirqooladda caddowga Somaliland u maleegaayo. Ciyaartowguna waa in ay ogaadaan in abtirsiindoodu tahay gobolka ay u ciyaarayaan ee ay magaciisa sitaan ama matalayaan.
Xoghayaha Guud ee Xisbiga Ucid.